Uthotho lwe-Apple Watch 4 luthatha amanyathelo angcono xa usichukumisa isithsaba sedijithali | IPhone iindaba
Uthotho lweApple Watch 4 lilinganisela ukubetha kwentliziyo yakho ngcono ukuba uchukumisa isithsaba sedijithali
Zimbalwa izinto ezinqabileyo ezibandakanyiweyo kwifayile ye- Uluhlu lwe-Apple Watch 4, lowo uye waphantse ngokungathandabuzekiyo yeyona mveliso ibalaseleyo phakathi kokusungulwa kwenkampani yeCupertino, kwaye ke yeyona nto inqweneleka kakhulu ngabasebenzisi, ngaphambi kwe-iPhone XS kunye ne-iPhone XR egxekwa kakhulu.
Iinyanga zihamba kwaye sisothuswa ziindaba ezithile ukuba sifunda nge-Apple Watch Series 4. Ngokwolwazi lwamva nje, iApple Watch Series 4 ibonelela ngemilinganiselo ebalekayo kunye nokukhawuleza kwepulsations ukuba sibamba isithsaba sedijithali., into engakhankanywanga ngokuthe ngqo.
Njengoko sisazi kakuhle, kubasebenzisi abane-ECG (abanini beApple Watch efunyenwe eUnited States kuphela) kufuneka ubeke umnwe wesalathiso kwiDigital Crown yeApple Watch ukwenza umlinganiso. Nangona kunjalo, Kwakukho iimbekiselo ezimbalwa kwinto yokuba ukuba senza isenzo esifanayo ngokuthatha ukubetha kwentliziyo, Asizukufumana kuphela iziphumo ezigqibeleleyo, kodwa ikwafumana iziphumo zomlinganiso ngendlela eqhubekayo kunye nekhawulezayo kunaleyo iApple Watch inikezela ngayo kuphela ngokukhanya kokukhanya emazantsi iwotshi uqobo.
Ukuba ubeka umnwe wakho kwiDigital Crown, yenza isekethe evaliweyo phakathi kwentliziyo yakho neengalo zakho, ukubamba amandla ombane ajikeleze umnwe. Sebenzisa isivamvo sombane ukulinganisa ukubetha kwentliziyo yakho, kuya kufuneka ubeke umnwe ngelixa umlinganiso usenziwa kwaye uya kufumana idatha ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
Es Inkampani kaCupertino ngubani onika ezi zalathiso. Njengoko abahleli bethu babonile, xa sisenza esi senzo sifumanisa ukuba sifumana uhlaziyo lwenqanaba lokulinganisa yonke imizuzwana, ayizizo zonke imizuzwana emihlanu njengoko bekunjalo ngemilinganiselo "yesiqhelo" yewotshi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Uthotho lweApple Watch 4 lilinganisela ukubetha kwentliziyo yakho ngcono ukuba uchukumisa isithsaba sedijithali